Ireo rindranasa 5 tsara indrindra hivarotana zavatra | Androidsis
Ny fahazoana vola fanampiny amin'ny fivarotana zavatra tsy ampiasainay intsony dia azon'ny tsirairay ampiasaina amin'ny fitaovana mety. Ao amin'ny Play Store dia afaka mahita maro be isika fampiharana hivarotra zavatraNa izany aza, tsy dia malaza daholo izy ireo eto amintsika.
Amin'ity lahatsoratra ity dia angoninay ny 5 fampiharana be mpampiasa indrindra hivarotana zavatra any Espana. Tsy nampidiriko Afoizo noho ny tsy fahitana firy ananany eto amintsika. Na ny AllcollectionSatria mifantoka amin'ny andiam-lahatsoratra izy io, tsy eo an-tanana ho an'ny mpampiasa rehetra izy io.
2 Toerana tsena Facebook
Milanuncios dia iray amin'ireo sehatra fivarotana entana faharoa veteran kokoa noforonina tany Espana izay, nohavaozina ankehitriny mba hifanaraka amin'ny Wallapop, ny fampiharana be mpampiasa indrindra any Espana hivarotra entana faharoa.
Ity sehatra ity nividy faharoa.es hanova ny anarana hoe Vibbo ary akatony amin'ny farany. Ny iray amin'ireo tanjany dia hita ao amin'ny fizarana fandefasan-kafatra, fizarana iray ahafahantsika mahafantatra raha toa ka mifandray amin'ny rindranasa na amin'ny alàlan'ny tranonkala ny mpividy na ny mpivarotra amin'izany fotoana izany. Amin'ny alàlan'ity resaka ity dia afaka mizara sary bebe kokoa momba ireo vokatra tiana amidy izahay, izay hisorohana ny tsy hiafaràny amin'ny WhatsApp satria saika mitranga izany raha mampiasa Wallapop isika.
Milanuncios dia mamela antsika amidio maimaim-poana ny entana faharoa raha tsy misy ny komisiona. Na izany aza, raha orinasa izahay dia manana andiana fepetra manokana sy tombony manokana izay tsy azon'ny mpampiasa tsy miankina ary misy vidiny.
Ny fampiharana Milanuncios dia azo alaina maimaim-poana ao amin'ny Play Store ary koa Azo alaina amin'ny Internet.
Milanuncios: Segunda mano, motera, pisos y empleo
Toerana tsena Facebook
Iray amin'ireo sehatra farany lasa safidy mahaliana tokony hodinihina, raha manana kaonty Facebook ianao dia ny Facebook Market Place, Sehatra fivarotana entana faharoa an'ny Facebook.
Toerana tsena Facebook tsy hita tsy miankina amin'ny maha fampiharana azyFa kosa, afaka mahita azy ao anatin'ny rindrambaiko Facebook izay mampiasa ny angon-drakitra toerana misy anay izahay mba hampisehoana amintsika ireo zavatra akaiky ny toerana misy anay.
Raha tsy mampiasa Facebook ianao dia voatery Hamorona kaonty Raha te hampiasa an'ity sehatra ity ianao, sehatra iray izay ny olana lehibe dia ny: voafetra ho an'ny mpampiasa Facebook izy io.
Amin'ny alàlan'ny fampiharana dia afaka miditra amin'ny antontam-bahoaka izay navoakan'ny mpivarotra teo amin'ny rindriny, fampahalalana izay tena tsy mamela antsika hahafantatra raha ara-dalàna ny mpivarotra na azo itokisana ireo vokatra amidiny.
Tsy toy ny sehatra hafa, Facebook Market Place tsy manana rafitry ny laza Izany dia mamela antsika hatoky na tsy hatoky ny mpivarotra na ny mpividy, ity dia iray amin'ireo teboka ratsy miaraka amin'ny filàna mamorona kaonty Facebook.
eBay nanana ny taonany volamena tamin'ny folo taona voalohany 2000, satria io no sehatra tokana nitantana ny varotra ny entana faharoa niaraka tamin'ny fandefasana sy ny fandoavam-bola amin'ny alàlan'ny PayPal.
Saingy, tamin'ny fahatongavan'ireo sehatra hafa toa an'i Wallapop, dia nihena ny lazan'ny an'ity sehatra ity. Tsy maintsy ampiantsika amin'izany fa mitombo ny isan'ny orinasa mivarotra entana vaovao, ao anaty hetsika iray kendrena manandrama mifaninana amin'i Amazon.
Na dia tsy be loatra intsony aza ny isan'ireo vokatra faharoa, dia sehatra tena tsara izany mitady izay vokatra tonga ao an-tsaina, satria ny valin'ny karoka dia mampiseho aminay ny valiny rehetra misy manerantany, ary mampiseho ny vidiny manodidina ny fandefasana izany any amin'ny firenentsika.
eBay dia sehatra tena tsara hividianana entana faharoa fa tsy hamidy. Ny kaomisiona avo lenta navoakan'ny samy eBay amin'ny lafiny iray, ary ny PayPal etsy ankilany, dia midika fa ny fivarotana vokatra amin'ity sehatra ity dia mety handany vola amintsika mihitsy aza.
Rehefa mampiasa ny lampihazo isika dia mahazo isa avy amin'ny mpivarotra sy ny mpividy, ka mamorona anay laza ao anatin'ny lampihazo.
Ny fomba fandoavam-bola mety indrindra hividianana amin'ny eBay dia PayPal, satria io no hany fomba hiarovana anao amin'ny hosoka. eBay dia azo alaina maimaim-poana amin'ny Play Store ary azo alaina ao amin'ny Internet ihany koa.
Raha te-hanary ny akanjo rehetra izay Tsy tianao intsony izany, tsy mety na lehibe loatra aminao, ny fampiharana tsara indrindra hivarotana azy sy hahazoana vola fanampiny dia Vint. Vinted no sehatra tokana mifantoka amin'ny fividianana sy fivarotana fitafiana faharoa, na dia toy ny sehatra hafa amin'ity karazana ity aza dia afaka mahita zavatra vaovao ihany koa isika.
Azo alaina maimaimpoana maimaimpoana maimaimpoana ilay rindrambaiko amin'ny alalàn'ny Play Store ary mamela anay ihany koa fidirana amin'ny alàlan'ny tranonkala. Tamin'ny taona 2019 i Vint dia nividy ny varotra fitafiana faharoa ary nividy sehatra Chicfy, ilay iray tamin'ny doka azo antoka, ry olon-tiako, ka mila mitady azy foana ianao.
Vinted - lamaody faharoa
Nanapa-kevitra ny hitahiry ity fampiharana ity hatramin'ny farany aho satria io no fampiharana ny ankamaroany dia nivarotra entana faharoa, na dia afaka mahita zavatra vaovao aza isika amin'ny alàlan'ny doka samihafa (miha-mahazatra) izay aseho an'ity sehatra ity hivarotana zavatra.
Wallapop dia tsy mitaky komisiona ny varotra eo amin'ny isam-batan'olona ary voatazona noho ny vola ampiasainy amin'ireo matihanina izay mamorona magazay manokana ao amin'ilay fampiharana, fomba eBay, na dia mifantoka amin'ny fiara faharoa aza.
Amin'ny maha-fampiharana mendrika ny sira azy, ny Wallapop dia manamora ny fanaovana azy fandefasana amin'ny mpividy, manefa komisiona kely ho an'ny fiantohana. Tsy mahazo afa-tsy ny mpividy rehefa nanaiky ny entana novidiny ny mpivarotra.
Olana io, satria azo inoana fa hihaona amin'ny olona iray izay misolo ny vokatra amin'ny vokatra hafa miasa isika, minia manimba izany mba tsy hiroso amin'ny fandoavam-bola ... ary ny mpivarotra dia tsy manana fotoana hiarovan-tena ary hanana ny antony foana ny mpividy.
Amin'izany heviny izany, Resy lahatra kokoa aho amin'ny fomba fiasan'ny eBay amin'ny alàlan'ny fandoavana PayPal, satria amin'ny alàlan'ny fifandirana dia afaka mahazo fifanarahana haingana amin'ny mpividy na mpivarotra ianao raha misy tsy fitoviana na manazava ny marina.
Iray amin'ireo olana mitohy miantraika amin'ity sehatra ity hatrany aorinan'ny nahavitany ny tsena ny hafatra, hafatra izay indraindray tsy tonga na tonga tara loatra, Ka raha mahita lahatsoratra mahaliana isika dia manana vintana tsara tsy hahazo izany raha tsy mandeha ny sehatra.
Toy ny eBayRehefa mampiasa ny lampihazo isika dia mahazo tombana avy amin'ny mpivarotra sy ny mpividy, izay ahafahantsika manangana laza ao anatin'ny lampihazo.
Wallapop dia azo alaina maimaim-poana amin'ny Play Store. Ho fanampin'izay, manome fidirana amin'ny tranonkala, tonga lafatra raha te-hanadio ny tranontsika isika ary te hivarotra izay rehetra hitantsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fampiharana Android » Ireo rindranasa 5 tsara indrindra hivarotana zavatra